Sellel Music Application မှာ ဟိုတုန်းကအဆိုတော်ကြီးတွေရဲ့ သီချင်းများနှင့်အတူအခုခေတ် လူငယ်အဆိုတော်တွေရဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေစုစည်းထားလို့ Selle App ကိုအသုံးမပြုရသေးဘူးဆိုရင်တော့ သင်ခေတ်နောက်ကျ ကျန်ခဲ့မှာနော် . . . ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သီချင်းတွေကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးအချိန်မရွေးနားဆင်ကြရအောင်.... Be in the trend and use Sellel Music Application which has songs from both popular music legends and new voices. Download and listen your favorite songs anytime anywhere...
တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ်
“Sellel” Music Serviceမေးလေ့ မေးထရှိသည့် မေးခွန်းများ
1. Sellel Music ဆိုတာဘာလဲ။
Sellel Music ဆိုတာ မြန်မာသီချင်း ကြိုက်သူများအတွက် သီချင်းတွေကိုအချိန်မရွေးနေရာမရွေးနားထောင်လို့ရနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားတဲ့ applicationတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Sellel Music က ကိုယ်နားထောင်ချင်တဲ့အဆိုတော် နဲ့ သီချင်းတွေကိုရှာပြီးနားထောင်လို့ ရသလို ကြိုတင် စီစဉ် ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ playlist တွေကိုလဲကိုယ့်ခံစားမှုနဲ့ တိုက်ဆိုင်တာကိုရွေးချယ် နားဆင် ခံစားလို့ ရပါတယ်။ မိမိစိတ်ကြိုက် playlist လဲဖွဲ့လို့ရပြီးကိုယ့် သူငယ်ချင်းတွေ ကိုလဲရှဲပေးလို့ရပါတယ်။
2. Sellel Music Applicationကိုဘယ်လိုရယူရမလဲ။
• Androidအတွက်ကို Google Play Store မှဒေါင်းလုပ် ရယူနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်)
• လိုတရhttp://sl.lotayamm.com/ မှတစ်ဆင့် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ MPT ၏Lotayaမှ တစ်ဆင့် ဒေါင်းလုပ် ယူရင်တော့ဒေတာဖိုးအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။(သို့မဟုတ်)
• iPhone သုံးတဲ့သူတွေကတော့ Apple App Store မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
3. Sellel Music ကိုဘယ် operating system တွေပေါ်မှာသုံးလို့ရပါသလဲ။
Android version 4.4 နှင့်အထက်ရှိတဲ့ဖုန်းတွေမှာသုံးလို့ရပါတယ်။ iOS 9.2အထက်ရှိတဲ့ iPhone, iPad, iPod Touch စတာတွေမှာလဲသုံးလို့ရပါတယ်။
4. Sellel Music ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။
• Facebook account သို့မဟုတ်မိမိရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းနံပတ်ကိုထည့်သွင်းပြီး sign up လုပ်ရုံနဲ့စပြီးသုံးလို့ရပါပြီ။
• Sign up လုပ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ playlist ဖွဲ့တာတို့သီချင်းတွေကိုfavouriteမှတ်တာတို့လုပ်လို့ရအောင်ပါ။
•အဲဒါတွေကို sign up လုပ်ထားတဲ့ Facebook account သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပတ်နဲ့မှတ်ထားတာ ဖြစ်လို့ဖုန်းပြောင်းကိုင်လဲယခင်သုံးထားတဲ့ Facebook account သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပတ်နဲ့ ပြန်ဝင်ရုံနဲ့နဂိုအတိုင်းဆက်ပြီးသုံးလို့ရမှာပါ။
5. Sellel Music ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တွေကဘာလဲ။
• App ကိုဖွင့်လိုက်လို့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ Home မှာသီချင်းတွေကိုကြည့်ရလွယ်အောင်ကဏ္ဍတွေခွဲပေးထားပါတယ်။လူကြိုက်အများဆုံးသီချင်းတွေ၊သီချင်းအသစ်တွေ၊လူကြိုက်များတဲ့အဆိုတော်တွေ၊ရောင်းကောင်းတဲ့ခွေတွေစသဖြင့်ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးတွေ့ရမှာပါ။
•အနုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ playlist တွေကို Hot ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီးမိမိပတ်ဝန်းကျင်စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ကိုက်ညီမဲ့သီချင်းတွေကိုစုစည်းထားပေးတဲ့ playlist တွေကို Mood ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတွေ့ရမှာပါ။
• ကိုယ် ကအီးမေးလ် Facebook ဗိုင်ဗာစတဲ့နည်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ share ပေးမှသူများတွေ့လို့ရမဲ့ private playlist တွေဒါမှမဟုတ်လူတိုင်းအလွယ်တကူရှာလို့တွေ့နိုင်မဲ့ public playlist တွေကိုလဲဖန်တီးလို့ရပါတယ်။အဲဒါတွေကိုတော့ Library ဆိုတဲ့အောက်မှာတွေ့ရမှာပါ။
• မိမိနားထောင်ခဲ့တဲ့သီချင်းတွေကိုလဲ Libraryအောက်မှာ ပြန်ရှာလို့ရပါတယ်။ MPT ကနေတဆင့်နေ့စဉ်ကြေးပေးပြီးသုံးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အဲဒီ့သီချင်းတွေအားလုံးကိုအင်တာနက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာ download လုပ်ထားပြီးနောက်အင်တာနက်မလိုပဲအကြိမ်ကြိမ် ပြန်နားထောင်လို့ရအောင်လဲစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။အဲဒီ့လို download လုပ်ထားတဲ့သီချင်းတွေကိုလဲ Libraryအောက်မှာရှာတွေ့မှာပါ။
• မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းတွေ playlist တွေကိုfavouriteအဖြစ်မှတ်ထားပြီးနောင် ပြန်ရှာရလွယ်အောင် Profileအောက်မှာထားပေးပါတယ်။
6. Mood ဆိုတာဘာလဲ။
ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တုန်းနားထောင်ဖို့ခရီးသွားနေတုန်းနားထောင်ဖို့စိတ်ပျော်နေတုန်းနားထောင်ဖို့စတဲ့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးနားထောင်လို့ကောင်းမဲ့သီချင်းတွေကိုစုစည်းထားပေးတဲ့ playlist တွေကိုစုပြီး Mood လို့နာမည်ပေးထားတာပါ။
7. My Library ဆိုတာဘာလဲ။
ကိုယ်ကအီးမေးလ် Facebook ဗိုင်ဗာစတဲ့နည်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ share ပေးမှသူများတွေ့လို့ရမဲ့ private playlist တွေဒါမှမဟုတ်လူတိုင်းအလွယ်တကူရှာလို့တွေ့နိုင်မဲ့ public playlist တွေကိုလဲဖန်တီးလို့ရပါတယ်။အဲဒါတွေကိုတော့ Library ဆိုတဲ့အောက်မှာတွေ့ရမှာပါ။မိမိနားထောင်ခဲ့တဲ့သီချင်းတွေကိုလဲ Libraryအောက်မှာ ပြန်ရှာလို့ရပါတယ်။ MPT ကနေတဆင့်နေ့စဉ်ကြေးပေးပြီးသုံးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အဲဒီ့သီချင်းတွေအားလုံးကိုအင်တာနက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာ download လုပ်ထားပြီးနောက်အင်တာနက်မလိုပဲအကြိမ်ကြိမ် ပြန်နားထောင်လို့ရအောင်လဲစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။အဲဒီ့လို download လုပ်ထားတဲ့သီချင်းတွေကိုလဲ Libraryအောက်မှာရှာတွေ့မှာပါ။
8. ကိုယ်ဘာသီချင်းနားထောင်တယ်ဆိုတာကိုသူများနဲ့ share လို့ရလား။
ကိုယ်ကအီးမေးလ် Facebook ဗိုင်ဗာစတဲ့နည်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ share ပေးမှသူများတွေ့လို့ရမဲ့ private playlist တွေဒါမှမဟုတ်လူတိုင်းအလွယ်တကူရှာလို့တွေ့နိုင်မဲ့ public playlist တွေကိုလဲဖန်တီးလို့ရပါတယ်။သီချင်းတစ်ပုဒ်ချင်းစီခွေတစ်ခွေချင်းစီစတာတွေကိုလဲ share လို့ရပါတယ်။
9. Sellel Music ကိုWiFiပေါ်မှာသုံးလို့ရလား။
WiFiပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းရဲ့ဒေတာသုံးပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
10. Sellel Music ဝန်ဆောင်မှုကို Subscribe မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ Serviceအသုံးပြုခဘယ်လောက် ကျသင့်မှာလဲ။
(၁) သင်၏ MPT ဖုန်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြု၍ Sellelကို login ပြုလုပ်ပါ။
(၂) သင်၏ One Time Pin ကို နှိပ်ပါ။
(၃) “အတည်ပြုရန်” ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် MPT သုံးစွဲသူများအတွက်၇ ရက်အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ ၇ ရက် ပြီးပါကတစ်ရက်လျှင် ၉၉ကျပ်တိတိ (အခွန် ၅% ပါပြီး)ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၄) ထို့နောက် သီချင်းများကိုSellel Music ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်အကန့်အသတ်မရှိသီချင်းများကို့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနားဆင်နိုင်ပါသည်။
11. Sellel Music ကို uninstall လုပ်ရုံနဲ့ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှု ရပ်တန့်သွားမှာလား။ ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်တန့်ရမလဲ။
• Sellel Music ကို uninstall လုပ်ရုံနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုမရပ်သွားပါဘူး။ Sellel Music App ရဲ့အောက်ခြေက More ဆိုတဲ့ခလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး Settings ထဲမှာ Unsubscribe လုပ်လို့ရတဲ့ menu ကိုတွေ့မှာပါ။အဲဒါကိုနှိပ်ပြီး unsubscribeအလွယ်တကူလုပ်လို့ရပါတယ်။(သို့မဟုတ်)
• ဝန်ဆောင်မှုရယူထားတဲ့ ဖုန်းမှတစ်ဆင့်8979 ကို OFFဟုစာတိုပေးပို့ခြင်းဖြင့်လဲ unsubscribe လုပ်လို့ရပါတယ်။
တစ်ရက်၉၉ကျပ်ကသီချင်းနားထောင်ဖို့အတွက်မူပိုင်ခနဲ့ဝန်ဆောင်ခပေးရတဲ့သဘောပါ။သီချင်းကိုဖုန်းထဲရောက်လာအောင် stream လုပ်ပြီးချက်ချင်းနားထောင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်နောင်မှာနားထောင်ဖို့ download လုပ်ထားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်အတွက်အင်တာနက်ကနေချိတ်ဆက်ပြီးရယူရမှာပါ။အဲဒီ့အတွက်ကိုယ်သုံးနေတဲ့အင်တာနက်ပေါ်မူတည်ပြီးဒေတာဖို့ထပ်ပြီးကျသင့်မှာပါ။
13. Sellel Music ကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
Sellel Music ကအင်တာနက်ချိတ်မထားရင်ယခင် download လုပ်ထားတဲ့သီချင်းတွေကိုပဲနားထောင်လို့ရပါတယ်။သီချင်း catalog တစ်ခုလုံးကိုကြည့်ချင်ရင်တော့သုံးနေတဲ့ဖုန်းမှာအင်တာနက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။မိုဘိုင်းဒေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်WiFiပဲ ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်။ Android 4.4 နဲ့ iOS 9.1 နဲ့အထက်ရှိတဲ့ဖုန်းတွေမှာမှသုံးလို့မှာပါ။ Sellel Music ရဲ့နောက်ဆုံး version ကိုလဲတရားဝင် ဖြန့်ချီထားတဲ့ Google Play Store, App Store နဲ့ MPT Lotayaတို့မှတဆင့်ပဲရယူသင့်ပါတယ်။အခြားတစ်နေရာရာမှရထားတဲ့ app က version နိမ့်နေတာတွေအခြားသူတစ်ယောက်ယောက်က ပြင်ထားတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။မသုံးသင့်ပါဘူး။
14. Sellel Music ကိုဖုန်းဘယ်နှစ်လုံးမှာတစ်ပြိုင်တည်းသုံးလို့ရလဲ။
15. မိမိရဲ့ profile မှာဘာတွေ ပြင်လို့ရလဲ။
Sellel Music ရဲ့ Profile မှာမိမိရဲ့ profile ပုံ၊နာမည်၊ကျား/မနဲ့မွေးနေ့တွေထည့်သွင်းဖော်ပြလို့ရပါတယ်။
16. Sellel Music ကအခြားသောသီချင်းနားထောင်တဲ့ app တွေနဲ့ဘာကွာသလဲ။
ကျနော်တို့ရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ကတော့ မြန်မာသီချင်းတွေရဲ့မူပိုင်ခွင့်ကိုအထူးအလေးထားတာပါပဲ။ငြိမ့်ညောင်းတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာအနုပညာရှင်တွေရဲ့အချိန်တွေအားစိုက်ထုတ်မှုတွေပါရမီတွေပေါင်းစပ်ထားရတာပါ။အဲဒီ့အတွက်တကယ်ရသင့်ရထိုက်တဲ့မူပိုင်ခတွေဉာဏ်ပူဇော်ခတွေရအောင်ကျနော်တို့ကအထူးအလေးထားပါတယ်။ Sellel Music ကိုသုံးပြီးသီချင်းတွေကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုတကယ်အထောက်အပံ့ပေးနေတာပါ။ကျနော်တို့ Sellel Music ကိုလုပ်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဂီတလောကတစ်ခုလုံးဝင်ငွေကိုတရားမျှတစွာရရှိပြီးလူတစ်စုချမ်းသာရုံမဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပါပဲ။
17. ကြုံတွေရရတဲ့ ပြသနာမပြေလည်သေးဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
Sellel Music ထဲမှာပါတဲ့ Send Feedback ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီး Sellel Musicအဖွဲ့သားတွေဆီကိုတိုက်ရိုက် email ပို့လို့ရပါတယ်။
FAQs of “Sellel” Music Service
1. What is Sellel?
Sellel Music is the latest mobile music application offering Myanmar music for fans around the world. Listen to your favorite songs anytime, anywhere.
Sellel Music allows you to search specific artists and songs, or if you prefer, you can enjoy the pre-programmed playlists that match your mood. You can also create playlists and share with your friends or anyone in the world.
2. How do I Download Sellel Music?
• Can download from Google Play Store for Android phones. (or)
• Can download from MPT LoTaYa Portal http://sl.lotayamm.com/ (or)
• Can download from iTunes Appstore for iOS devices.
3. Which Mobile Operation System does Sellel Music Support?
Sellel will work on Android devices withaminimum of version 4.4 and above. For iOS, we are supporting above iOS 9.2 version.
4. How do I use Sellel Music?
Simply sign up with Facebook or your mobile number and enjoy the music. Signing up is necessary to create own content such as playlists or keepalist of favourite songs, albums and artists.
5. What are the main features of Sellel?
Home page has multiple sections for easy access to top and new songs, albums or artists. Playlists curated by artists and us can be found under Hot. Songs suitable for various moods can be found under Mood. Songs can also be browsed with their Genre.
You can create private and public playlists under Library. Public playlists can be searched by anyone and listen to it. Private playlists must be shared via email, Viber, Facebook, etc. If you forgot the name of the song or playlist you listened before, do not worry. We keptarecent history for you to look them up again under Library. Premium users can also download the songs and listen to them even when the phone is not connected to Internet. Downloaded songs can also be found under Library.
You can choose any song, album or artist as your favourite and you can easily find them under your Profile.
6. What is Mood?
Mood includesaset of playlists curated to match various activities and emotions.
7. What is My Library?
8. Can I share songs?
You can create private and public playlists under Library. Public playlists can be searched by anyone and listen to it. Private playlists must be shared via email, Viber, Facebook, etc. If you hearasong you like, tap on the + sign to add it toaplaylist.
9. Can I use Sellel on WiFi?
Sellel can be use on WiFi networks as well as with mobile internet.
10.How to subscribe the Sellel Music service? How much will be charge for service fees?
If you’re on the MPT phone network (using your mobile data)
1) Login to Sellel Music App using your MPT number.
2) Enter One Time Password
3) Click ‘Confirm’ and then you will get7days free FOC (only very first time MPT users), after that, FOC period, we will charge 99 Ks/day (including 5% commercial tax).
4) Start using Sell Music App!
In order to get unlimited music every day, you must subscribe to Sellel Music App using your MPT phone number.
11. Will I be still charged premium subscription if I simply uninstall Sellel?
If you uninstall Sellel app from your phone, you won’t be automatically unsubscribed. You need to unsubscribe from the app before uninstalling to ensure that you won’t be charged when the subscription automatically renews. (or) you can send OFF to 8979 via SMS.
12. Do I still need to pay for data usage after I suscribe to Sellel Music premium plan?
Yes. The subscription fees for premium plan is for Sellel Music service only and depending on where you stream or download the songs, you may still have to pay for the data service.
13. Sellel Music is not working on my smartphone, what should I do?
Sellel Music requires you to be connected to the internet to login and sign up to stream songs, using either 3G, 4G or Wi Fi connection. Check if your smartphone is using Android OS version 4.4 or above. If the Android version is lower than 4.4, please upgrade the Android OS version to at least version 4.4 if supported by the phone model. Try uninstalling and re-installing the Sellel application from Google Play Store.
14. How many devices can I use Sellel Music on at the same time?
15. How do I update my Profile details?
Go to Profile section on the Sellel Music app. You can add/edit your profile picture and username, gender and Date of Birth.
16. How is Sellel different from other similar services?
We respect all copyright owners who collectively created these beautiful songs, and we have obtained permissions from all the copyright owners of the songs before we make those songs available on Sellel app. We also make sure everyone is compensated fairly so that they can create more high quality songs all the fans enjoy. We do not use the songs just because one or two copyright owners are willing to give permission. We believe that all parties involved in creation of those songs should be compensated fairly no matter they are famous or not. If you are using Sellel, you should be proud of yourself knowing that you are actually promoting the health of the music industry and not just to makeafew people richer.
17. How to unsubscribe from Sellel Music premium plan?
You can unsubscribe through menus of Sellel Music app.
18. Still cannot find the answer to your question?
If none of the above answers directly relates to your question you have, simply hit the “Send feedback” button, choose the type of question and send your inquiries directly to Sellel Music help and support team via email.
ဤဝန်ဆောင်မှုသည် Solatido Entertainment Co., Ltd. မှ ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုခြင်း မပြုခင်အောက်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူရပါမည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် သင်နှင့် Solatido Entertainment Co., Ltd.အကြား တရားဝင် သဘောတူညီမှု စာချုပ်စာတမ်း တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်သည်။ သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူ သုံးစွဲရန် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားပါက ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သဘောတူပြီး ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ သင်သည် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သဘောတူနိုင်စွမ်း မရှိလျှင် သို့တည်းမဟုတ် သဘောမတူလျှင် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူသုံးစွဲခြင်း ပြုလုပ်ခွင့်ရှိမည် မဟုတ်ဘဲ လက်ရှိတွင် သုံးစွဲနေပါကလဲ သုံးစွဲခြင်းမှ ချက်ချင်း ရပ်တန့်ရပါမည်။
သင်သည်အခြားသူ တစ်ဦးဦးကို ဤဝန်ဆောင်မှုကို ပေးသုံးပါက (၁) ထိုသူသည် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သိရှိလိုက်နာရန် နှင့် (၂) ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်နွယ်သော ထိုသူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အရပ်ရပ်တို့အပေါ် သင်သည်အပြည့်အဝ တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်သည်။
Solatido Entertainment Co., Ltd. သည် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအချိန်မရွေး စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲ နိုင်ပြီး ထိုပြောင်းလဲမှုသည် တမုဟုတ်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော ပြောင်းလဲမှုများကို သင့်အနေဖြင့် သိရှိနိုင်ရန် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ရံဖန်ရံခါ ဖတ်ရှုနေရမည်ကိုလည်း သဘောတူပါသည်။ ပြောင်းလဲမှု ရှိပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုကို သင့်အနေဖြင့် ဆက်လက် သုံးစွဲနေပါက ထိုသို့သော ပြောင်းလဲမှုများကိုလဲ သဘောတူပြီးသား ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရပါမည်။
Solatido Entertainment Co., Ltd. သည် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပြောင်းလဲခြင်း ထပ်တိုးခြင်းများအချိန်မရွေး စိတ်တိုင်းကျ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်မှုများအတွက် သင် သို့မဟုတ်အခြားသူများအပေါ် တာဝန်ခံမှုများ ရှိရန် မလိုအပ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ထားပြီးသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် ထိုပြောင်းလဲမှုများအား လက်ခံသည် ဟု မှတ်ယူရပါမည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအခြားထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုခု နှင့်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပေးအပ်သည် မဟုတ်ပါ။အခြား တစ်ခုခုကို ဝယ်ယူ သို့မဟုတ် ရယူ ခြင်း သည် ဤဝန်ဆောင်မှုကို ရယူခြင်း မမည်ပါ။ ဤအချက်သည် Solatido Entertainment Co., Ltd. မှ ပေးသော ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသာမက Solatido Entertainment Co., Ltd. နှင့် ဆက်နွယ်သည့် လုပ်ငန်းများမှ ပေးသော ထုတ်ကုန် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများလည်းအကျုံးဝင်သည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ တားမြစ်ထားသောအချက်များသည် ကုန်စင်သည်ဟု မှတ်ယူ၍မရပါ။ Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် ဤဝန်ဆောင်မှုကို ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဤဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသုံးစွဲနေသောအခြားသူများကို ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည့် မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များ ကို မဆို တွေ့ရှိပါက ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သဘောတူညီမှုကို ချိုးဖောက်သည်ဟု ယူဆ၍ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွင် ပါဝင်သော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲခြင်းသည် Solatido Entertainment Co., Ltd. မှအလျဉ်းသင့်သလို ချမှတ်ပြင်ဆင်ထားသော စည်းကမ်းများ၊ ညွန်ကြားချက်များ၊အစီအစဉ်များ၊ မူဝါဒများ၊ နည်းဥပဒေများ ကို လိုက်နာပြီးသာ သုံးစွဲခြင်း ဖြစ်ရပါမည်။အောက်ပါ စည်းကမ်းနှင့် မူဝါဒများလည်း ပါဝင်ပါသည်။
Solatido Entertainment Co., Ltd. ၏အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (available at http://sellelmusic.com/help/tnc.php)
2.ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသုံးစွဲရန် လိုအပ်ချက်များ
* ဤဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုခြင်းဖြင့် Solatido Entertainment Co., Ltd. မှ မလျဉ်းသင့်သလို သတ်မှတ်ပေးမည့် ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲရန် လိုအပ်သည့် စက်ပစ္စည်း software ဝန်ဆောင်မှုအစရှိသည် လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို သင့်အနေဖြင့် လိုက်နာဖြည့်ဆည်းပါမည်ဟု သဘောတူပြီးသား ဖြစ်ရပါမည်။
* ထိုသို့သော လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရာတွင် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်း software နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် Solatido Entertainment Co., Ltd. မဟုတ်သောအခြားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုခုထံမှအခကြေးငွေဖြင့်ဖြစ်စေအခမဲ့ဖြစ်စေ ရယူရမည် ဖြစ်ပြီး ထိုလုပ်ငန်းများမှ ချမှတ်သော မူဝါဒများ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလည်း လိုက်နာရန် လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်ပါမည်။
* ထို စက်ပစ္စည်းများ နှင့် software များကို သုံးစွဲရာတွင် ထုတ်လုပ်သူများ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုအပ်သော ထိန်းသိမ်းမွမ်းမံမှုများ update များကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။
* ဤဝန်ဆောင်မှု ကိုအပြည့်အဝ ခံစားရယူနိုင်မှုသည် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်း softwareအခြား ဝန်ဆောင်မှုအစရှိသည် တို့အပေါ်တွင် မှီခိုမှု ရှိပါသည်။ စက်ပစ္စည်း softwareအခြား ဝန်ဆောင်မှုအစရှိသည့် လိုအပ်ချက်များ သည် Solatido Entertainment Co., Ltd. ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မရှိသော လုပ်ငန်းများထံမှ ရယူသုံးစွဲရသည်ဖြစ်၍ ထိုအရာများ၏အရည်အသွေးနှင့်အပြည့်အဝ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိမရှိကို Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
3.ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသုံးစွဲခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း
ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများ software များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ (Solatido Entertainment Co., Ltd.အပါအဝင် မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှ မဆို ပေးသော မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ၊ Broadband, Fiberအစရှိသောအင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုအစရှိသည်) တို့ကိုအသုံပြုနိုင်ရန်အတွက် ရယူခြင်း ဝယ်ယူခြင်း တပ်ဆင်ခြင်းအစရှိသည့်တို့ ကို လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်မှာ သင့်ထံတွင်သာအပြည့်အဝရှိသည်။
Solatido Entertainment Co., Ltd. မှအခါအားလျော်စွာ ချမှတ်ထားသောအနိမ့်ဆုံး လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ထို စက်ပစ္စည်းများ software များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ကို ရယူပြီး ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိစေရန် သင့်တွင် တာဝန်ရှိသည်။ လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိသောအရာများကို တွဲသုံးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စက်ပစ္စည်း ချို့ယွင်းမှုများနှင့် မပြည့်စုံသော ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးအတွက် Solatido Entertainment Co., Ltd. တွင် တာဝန်လုံးဝ မရှိပါ။
သင်လိုက်နာရန်လိုသောအထက်ပါ ချမှတ်ချက်များကို မလိုက်နာပဲ ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် Solatido Entertainment Co., Ltd. ၏ ကွန်ယက်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို ထိခိုက်မှုများ နစ်နာမှုများရှိပါက ထို ထိခိုက်နစ်နာမှုများအားလုံးအတွက် သင့်မှာ တာဝန်ရှိပါသည်။အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက် မပြည့်မှီသော သင့်၏ စက်ပစ္စည်းများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုကို ပြည့်ဝစွာ ပေးဆောင်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်သော နစ်နာမှုအဝဝကိုလည်း တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ကြောင်း Solatido Entertainment Co., Ltd. မှအသိပေးပြောကြားအပ်ပါသည်။
ယုံမှား သံသယ မရှိစေရေးအလို့ငှါ Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါ တို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လုံးဝ တာဝန် မယူပါ။
* ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်း software နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများ (Solatido Entertainment Co., Ltd.အပါအဝင် မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှ မဆို ပေးသော မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ၊ Broadband, Fiberအစရှိသောအင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုအစရှိသည်) ကို ဝယ်ယူရရှိခြင်း နှင့် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း
* ဤဝန်ဆောင်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်သည်ဟု ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသောအခြား မည့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုကို မဆို
ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အကောင့်တစ်ခုကို မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပြီး ထိုအကောင့်ထဲသို့ ဝင်ရန်အချက်အလက်များကို ဖန်တီးရန်အတွက် သင့်မှာ တာဝန်ရှိပါသည်။ ထိုအကောင့်ကိုအခြားသူများနှင့် ပူးတွဲသုံးစွဲခွင့် မရှိပါ။ မိမိအကောင့်ကို လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းထားရန် တာဝန်မှာ သင့်ထံတွင်အပြည့်အဝရှိပါသည်။ သင်သိသည် ဖြစ်စေ မသိသည်ဖြစ်စေ သင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖြစ်စေ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ဖြစ် စေ သင်ဖြစ်စေအခြားသူမှ ဖြစ်စေ သင့်အကောင့်ဖြင့် ဝင်၍ပြုလုပ်သော ဆောင်ရွက်ချက်များအားလုံးအတွက် သင့်ထံတွင် တာဝန်ရှိပြီး ထိုအကောင့်အချက်အလက်များ မပျောက်ပျက်ရေးအခြားသူ ရယူသွားခြင်း မရှိနိုင်ရေးတို့အတွက် သင်သည် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။အောက်ပါအချက်အလက်များကိုလည်း သင့်အနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။
* Solatido Entertainment Co., Ltd. မှ တောင်းဆိုသည့်အခါတွင် သင့်၏ လက်ရှိ email ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ ဖုန်းနံပတ် နှင့် ငွေပေးချေရန်လိုအပ်သောအချက်တို့ကိုအမှန်အတိုင်း ပေးပါမည်။
* သင့်၏အကောင့်အားအခွင့်မရှိဘဲ ရယူသုံးစွဲမှုများ ရှိပါက Solatido Entertainment Co., Ltd. ထံသို့အကြောင်းကြားပေးရပါမည်။
* သင့်၏အကောင့်အချက်အလက်များကိုအခြားသူမှားအား ပေးသုံးခြင်း လွှဲအပ်ပေးခြင်းများ မပြုလုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့အကောင့်အချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲ ထုတ်ဖော်ခြင်းများအလွဲသုံးပြုခြင်းများ ရှိပါက Solatido Entertainment Co., Ltd. ထံသို့ ချက်ခြင်းအကြောင်းကြားရပါမည်။ ထိုသို့အကြောင်းကြားပြီး ၇ရက် မြောက်သည့်နေ့အထိ (သို့မဟုတ် Solatido Entertainment Co., Ltd. မှ သင့်ထံ ပြောကြားသော ကာလအတွင်း) သင်သည် ဤ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသော ထိုအကောင့်နဲ့ ပတ်သတ်သော ဖြစ်ပျက်သမျှ ကိစ္စအဝဝအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုကို ရယူခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအမျိုးအားအသုံးပြုခွင့်အပါအဝင်အခွင့်အရေးများနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို သင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်သည်အောက်ပါအချက်အလက်များကို သဘောတူပါသည်။
* Solatido Entertainment Co., Ltd. ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုသူ ရရှိသောအခွင့်အရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်များ သည်အခြား တစ်ယောက် ရရှိသောအခွင့်အရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်များနှင့် မတူညီမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။
* ထိုအခွင့်အရေး နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ ရရှိရန် သင်သည် ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။
* သင့်ကို တစ်ချိန်တစ်ခါက ပေးခဲ့သောအခွင့်အရေးများ နှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ဆက်လက်ရရှိနေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် Solatido Entertainment Co., Ltd. က ကတိကဝတ် မပြုပါ။ ထိုအခွင့်အရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကိုအချိန်မရွေး စိတ်တိုင်းကျ ပြောင်းလဲ ပြုပြင်ပိုင်ခွင့်သည် Solatido Entertainment Co., Ltd. ထံတွင် ရှိပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် ဤဝန်ဆောင်မှုကို သုံးခြင်းသည်အောက်ပါအခြင်းအရာများကို ဖြစ်အောင် မဆောင်ရွက်ပါဟု ကတိကဝတ် ပြုပါသည်။ မသမာသူများအား Solatido Entertainment Co., Ltd. ၏ ကွန်ယက်ထဲသို့ ထိုးဖောက် ဝင်ရောက် စေခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးအောင် သို့မဟုတ်အခြား သောအန္တရာယ် တစ်ခုခု ကျရောက်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဤဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်အောင် ထောက်ပံ့ထားသော ယန္တရား နှင့် စနစ်များကို သူတို့၏ ခံနိုင်ဝန်ထက် ပိုများစေခြင်း၊ ကွန်ပြူတာ ပရိုဂရမ်တစ်ခုခုသုံး၍လည်းကောင်း ကိရိယာပစ္စည်းသုံး၍သော်လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှုကိုအနှောက်အယှက်ပေးခြင်း စသည်တစ်ခုခု လုပ်ဆောင်ပြီး Solatido Entertainment Co., Ltd. ၏ ကွန်ယက်ကို ချိနဲ့အောင် ပျက်စီးအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ။
ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုထားသော နည်းပညာ တစ်ခုခုသည် သင်အသုံးပြုချင်တိုင်း သုံးနိုင်ခြင်း မရှိအောင် တားမြစ်ကန့်သတ်မှုများ ရှိနိုင်သည်ကို သင့်အနေဖြင့် သိရှိနားလည်သဘောတူပါသည်။ ထိုသို့ တားမြစ်ကန့်သတ်မှုများ ရှိသည် ဖြစ်စေ မရှိသည် ဖြစ်စေ သင်သည် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ကို လိုက်နာ၍သာ ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါမည်။
သင်သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းသာ ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနေသလား မနေဘူးလား ဆိုတာကို စိစစ်ရန် ဒါမှမဟုတ် ချမှတ်ထားသော ဥပဒေများကို လိုက်နာမှု ရှိမရှိ ကို စစ်ဆေးရန် ဒါမှမဟုတ် ဥပဒေအရ စောင့်ကြည့်ရန် တောင်းဆိုခြင်း ခံရသည့်အတွက် Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် သင့်၍ လုပ်ဆောင်ချက်များကို စောင့်ကြည့်မှုများ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက် သင့်အား ခွင့်ပြုပေးထားခြင်းသည် သင့်၏ ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးသာ ဖြစ်ပြီး စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအတွက် ခွင့်မပြုထားပါ။အခြားသူများက ဤဝန်ဆောင်မှုကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဘောင်အပြင်မှအသုံးပြုနိုင်အောင် ခွင့်ပြုခြင်း ပံ့ပိုးခြင်းများ မရှိရပါ။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်မှုမှားအတွက် Solatido Entertainment Co., Ltd. ထံမှ စာဖြင့် ခွင့်ပြုချက်များ ရယူရပါမည်။ ထို့အပြင် ဤဝန်ဆောင်မှုကို ခွဲခြမ်းပြီး ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်း၊ တဆင့်ဖြန့်ဝေခြင်း၊ တဆင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်း စသဖြင့် ဤဝန်ဆောင်မှုကို တနည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည် ရောင်းချခြင်း ဖြန့်ဝေခြင်း တို့ကို သင့်အနေဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
သင့်အနေဖြင့် ဤဝန်ဆောင်မှုမှ ပေးထားသောအရာများ (ဖျော်ဖြေမှု စသည်) ကို တရားဥပဒေများအတိုင်းသာ ရယူသုံးစွဲပါမည်ဟု သင့်အနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။အထူးသဖြင့် သင်သည်အောက်ပါအခြင်းအရာများကို မလုပ်ပါဟု သဘောတူပါသည်။
* မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ဝင်ငွေ ပိုမိုရစေလိုသောအလို့ငှာ မမျှတသော နည်းလမ်းဖြင့် သီချင်းနားထောင်မှုအခေါက်ရေ များအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ထိုသို့ပြုလုပ်သည်ယူ တွေ့ရှိရပါက ထို နားထောင်သည့်အကြိမ်ရေများကို ပယ်ဖျက်ခြင်းဖြင့် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်အားလုံး မျှတသော ဝင်ငွေခွဲဝေမှု ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
* Solatido Entertainment Co., Ltd.၊ Solatido Entertainment Co., Ltd. နှင့် လက်တွဲလုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ ဤဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသုံးစွဲသည့်အခြား စားသုံးသူများအနှောက်အယှက်ပေးခြင်း၊ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊အဆင်မပြေဖြစ်စေခြင်း သို့မဟုတ် ထိုအခြင်းအရာများကိုအခြားသူ တစ်ဦးဦးမှ ပြုလုပ်ရန်အားပေးခြင်း ခွင့်ပြုခြင်း။
*အလိုအလျောက်လုပ်နိုင်သော နည်းတစ်ခုခုကို သုံး၍ဖြစ်စေ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖြစ်စေ Solatido Entertainment Co., Ltd. ၏ web pages များ နှင့်အခြားသော ဖိုင်များအချက်အလက်များကို Solatido Entertainment Co., Ltd. သို့မဟုတ်အခြား သက်ဆိုင်ရာ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ခွင့်ပြုချက် မရှိပဲ ရယူခြင်း မိတ္တူကူးခြင်း ပွားယူသွားခြင်း။
* ကိရိယာတစ်စုံတစ်ခု software တစ်ခုခု စသည်ကိုအသုံးပြုပြီး ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ဤဝန်ဆောင်မှု၏ ခံနိုင်ဝန်ထက် ပိုအောင် တမင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
* မကြားဝံ့မနာသာသောအရာများ၊ သူတပါး၏ နာမည်ကို ထိပါးစေသော ကိစ္စများ၊ တရားမဝင် ပစ္စည်းများ၊ ဆေးလိပ်၊ လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၊ ဆေးဝါးများ၊ လက်နက်ခဲယမ်းများအစရှိသော တရားမဝင်သော ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တရားဝင် ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိသောအခြင်းမရာများကို ဤ ဝန်ဆောင်မှု ကိုအသုံးချပြီး တစ်စုံတစ်ခု ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ဤတွင် တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ခွင့်ပြုချက် မရရှိပဲ ထိုသူနှင့် ဆိုင်သည့် ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်းများ မူပိုင်ခွင့်ပစ္စည်းများကို ပိုင်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက် မရရှိပဲ ရယူခြင်း ဖြန့်ဝေခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
* ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သတ်သော တားမြစ်ချက်များကို မသမာသော နည်းများဖြင့် ဖြတ်ကျော်ရန် ကြိုစားခြင်း။ လုံခြုံရေးအစီအမံများကို နည်းပညာများကို တရားမဝင် ဖြတ်ကျော်ခြင်း ဖျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ထိုသို့ပြုလုပ်သူများအားအကူအညီပေးခြင်း နှင့်အခြားသော မသမာမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း။
ဤဝန်ဆောင်မှုကို သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ရန် Solatido Entertainment Co., Ltd. သည် သင့်အား သီးသန့်မဟုတ်သော ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသော ပုဂ္ဂလိက သုံးရန်အခွင့်လိုင်စင်ကို ပေးအပ်ပါသည်။ ထိုခွင့်ပြုချက်တွင် reverse-engineering ပြုလုပ်ခြင်း၊ မိတ္တူကူးခြင်းများ၊အတုအပ ဖန်တီးခြင်းများ၊ ဤဝန်ဆောင်မှုကို မည်သို့ ဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိအောင် နည်းပညာများသုံး၍ ဖော်ထုတ်ခြင်း စသည့် တို့ကို လုပ်ကိုင်ရန်အခွင့်အရေးများ မပါဝင်ပါ။ ရပ်စဲခြင်းအပိုဒ်တွင်ပါသောအချက်များကို မသွေဖယ်ပဲ Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်ကိုအချိန်မရွေး စိတ်တိုင်းကျ ပြန်လည်ပြုပြင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။အကယ်၍ သင်သည် ခွင့်ပြုထားသည်ထက် ကျော်လွန်ချိုးဖောက်သည်ဟု တွေ့ရှိရပါက ထိုခွင့်ပြုချက်ကိုလဲ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းပါမည်။
သင်သည် ဤဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမည်ဟု သတ်မှတ်ပေးထားသည့်အတိုင်းသာ သုံးရပါမည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေအခြားတစ်ဦးကို ကူညီ၍ဖြစ်စေ ဤဝန်ဆောင်မှုကို ပျက်ပြားအောင် လုပ်ခြင်း ပြုပြင်ခြင်း reverse-engineering ပြုလုပ်ခြင်း မည်ကဲ့သို့ တည်ဆောက်ထားသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် နည်းပညာများအသုံးပြု၍ ဖော်ထုတ်ခြင်း စသည့် ခွင့်မပြုထားသည်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း ဤဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့ တုပ ဖန်တီးခြင်းများ မပြုရပါ။ သင်သည် ခွင့်ပြုထားသော ပရဝုဏ်ပြင်ပမှ ရယူခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ရှိပါက ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် သင်သည် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး သင်နေထိုင်ရာ ဒေသ၏ တည်ဆဲ ဥပဒေများအရအရေးယူခြင်း ခံရပါမည်။ ဤနေရာတွင် သုံးထားသော reverse-engineering ဆိုသည်မှာ ဤဝန်ဆောင်မှုကို မည်သို့ ဖန်တီးထားသည် တည်ဆောက်ထားသည် စသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် မည်သည် နည်းပညာသုံးထားသည် မည်သို့သောအဖွဲအစည်းပုံစံဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည် စသည်တို့ကို သိရှိရန် ကြိုးစားမှုများ လေ့လားမှုများ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများအားလုံးပါဝင်သည်။
5.ပါဝင်သောအခြင်းအရာများ (The Content)
ဤဝန်ဆောင်မှုထဲမှ သို့မဟုတ် ဤဝန်ဆောင်မှုမှ တဆင့် ဝယ်ယူထားသောအခြင်းအရာများ (သီချင်း စသည်) ကို ဝယ်ယူခဲ့သည့်အချိန်တွင် သင်သည် ဝယ်ယူခွင့်ရှိသော နေရာတွင် တကယ်တည်ရှိနေကြောင်း ကတိပြုပါသည်။အကယ်၍ Solatido Entertainment Co., Ltd. မှ တစ်ချိန်ချိန်တွင် သင့်အနေဖြင့် လိမ်လည်မှု တစ်ခုခု ပြုလုပ်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါက သင်ဝယ်ယူခဲ့သော ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ်အခြင်းအရာကို ပေးအပ်ခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင့်အနေဖြင့် ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့် ၎င်းမှ ပေးသောအခြင်းအရာများကို ရယူပိုင်ခွင့်ကိုလဲ ကန့်သတ်ခြင်း ဖြတ်တောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါအချက်များကို သိရှိနားလည် သဘောတူပါသည်။
*အခြင်းအရာများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပေးထားသောအချက်အလက်များသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန်သာ ရည်ရွယ်၍ မှန်ကန်မှု သေချာမှု ရှိကြောင်းကိုအာမ မခံပါ။
*အခြားနေရာများတွင် မည်သို့ဖော်ပြထားသည်ဖြစ်စေအခြင်းအရာများကို သင့်အားအပြီးအပိုင်ရောင်းချခြင်း မဟုတ်ဘဲ ထိုအခြင်းအရာများကိုအသုံးပြုခွင့်ကိုသာ လိုင်စင်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
* သင့်အား ပေးထားသောအသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်သည် သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင်များ ထိုအခြင်းအရာများကို ပေးသော သူများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ ပေါ်တွင်မူတည်ပြီး သင်သာလျှင် သီးသန့်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပေးခြင်း မဟုတ်ဘဲ သင့်အနေဖြင့်လဲ ထို လိုင်စင်ကိုအခြားသူများသို့ လွှဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ထိုလိုင်စင်သည်လဲ သင့်ကိုသာ ပေးခြင်းဖြစ်ပြီးအခြားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်မျှ မဆိုင်ပါ။ သတ်မှတ်ပေးထားသော နေရာဒေသ
အတွင်းသာ ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားအတွက်သာအသုံးပြုခွင့်ရှိပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် သုံးပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ထိုလိုင်စင်သည် သင့်အား ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပိုင်ခွင့် တစ်စုံတစ်ရာ မပေးပါ။
* ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ မိတ္တူပွားခြင်းများ ဖြန့်ဝေခြင်းများ ကို လုံးဝ မလုပ်ရန် တားမြစ်ထားပါသည်။ ကျူးလွန်ပါက တည်ဆဲ ဥပဒေများအရအရေးယူခြင်း ခံရပါမည်။
*အသိပညာပစ္စည်းများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ (Intellectual Property Rights) ကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များ ကို လိုက်နာပြီး မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေများအတွင်းမှသာအသုံးပြုရပါမည်။
* သင့်အနေဖြင့်အခြင်းအရာများကို သုံးစွဲရာတွင် Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့်အလျဉ်းသင့်သလို ထုတ်ပြန်သော တားမြစ်ချက်များအတွင်းမှသာအသုံးပြုရပါမည်။
* သင်သည် ထိုအခြားအရာများကို ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပြူတာများ ဖုန်းများ tablet များအစရှိသော စက်ပစ္စည်းများ တစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား ကူးယူခြင်း ပို့ဆောင်ခြင်းများ မလုပ်ရပါ။
ဤဝန်ဆောင်မှုမှ ပေးသောအခြင်းအရာများကိုအသုံးပြုမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော Solatido Entertainment Co., Ltd. ၏ ရပိုင်ခွင့်များကိုအခြား လုပ်ငန်း ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ယောက် မှ လိုအပ်သလို စည်းကြပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်ကို သင့်အနေဖြင့် နားလည် သဘောတူပါသည်။
6.အသိဉာဏ်ပစ္စည်းများ ဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်များ (Intellectually Property Rights)
ဤဝန်ဆောင်မှုတွင် သုံးထားသော (Solatido Entertainment Co., Ltd.အမည် နှင့် the Solatido Entertainment Co., Ltd. နှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအပါအဝင်) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ လုပ်ငန်းနာမည်များ logo များ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများအားလုံးသည် Solatido Entertainment Co., Ltd. ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဖော်ကုမ္ပဏီများအခြား သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများမှ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက် သင့်ကို ပေးသောအခွင့်အရေးသည် ထို ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ လုပ်ငန်းနာမည်များ logo များ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများကို သုံးစွဲပိုင်ခွင့်များ ရပိုင်ခွင့်များကို ပေးအပ်ခြင်းအလျဉ်းမပါဝင်ပါ။ ထိုအခွင့်အရေးများကို Solatido Entertainment Co., Ltd. ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဖော်ကုမ္ပဏီများအခြား သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများမှ စာဖြင့် ခွင့်ပြုချက် ပေးမှသာ သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို နာမည်များကိုအသုံးပြုပြီး ဤဝန်ဆောင်မှုကို ရည်ညွှန်းခြင်းအခြားတစ်ခုခုကို ရည်ညွှန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိပါ။ သင့်အားပေးထားသောအခွင့်အရေးအားလုံးကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရှိပါသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုမှ ပေးသုံးထားသောအခြင်းအရာများအားလုံး ၏အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့် နှှင့် ရပိုင်ခွင့်အားလုံးသည် Solatido Entertainment Co., Ltd. ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဖော်ကုမ္ပဏီများအခြား သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လူပုဂ္ဂိုလ်များမှ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက် သင့်ကို ပေးသောအခွင့်အရေးသည် ထိုအခြင်းအရာများကို မိတ္တူကူးခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပုံစံပြောင်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ခွင့်မပြုထားသော စက်ပစ္စည်းထဲသို့ ထည့်သွင်းခြင်း၊အများရယူနိုင်အောင် လုပ်ပေးခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ငှါးရမ်းခြင်း၊ ချေးငှါးခြင်း၊ ပြသခြင်း၊ ဖျော်ဖြေခြင်း၊ လေလှိုင်းမှ လွှင့်ခြင်း၊အခြားသူများအား ခွင်ြ့ပုပေးခြင်း၊ လွှဲအပ်ခြင်း စသဖြင့် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ရယူနိုင်အောင် ပေးအပ်ခြင်း၊ တနည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ရိုက်ကူးခြင်းအသံဖမ်းခြင်း စသည့်အခွင့်အရေးများအလျဉ်းမပါဝင်ပါ။ ထိုအခွင့်အရေးများကို Solatido Entertainment Co., Ltd. ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဖော်ကုမ္ပဏီများအခြား သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ မူပိုင်ခွင့် ပိုင်ရင် များမှ စာဖြင့် ခွင့်ပြုချက် ပေးမှသာ သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အားပေးထားသောအခွင့်အရေးအားလုံးကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရှိပါသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုတွင် ဖော်ပြထားသော မူပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များကို ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့် မရှိပါ။ ဤဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်သော မူပိုင်ပစ္စည်းများအပါအဝင်အခြင်းအရာများကို သတ်မှတ်ချက်များ ကို ကျော်လွန်၍အသုံးပြုနိုင်အောင် နည်းအမျိုးမျိုးသုံး၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းများအားလုံးကို ရှောင်ကြဉ်ပါမည်ဟု သင့်အနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ လိုအပ်ပါက Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော နည်းလမ်းများကို သုံးပြီး ပံ့ပိုးမှုပေးပါမည်။
8.ကျသင့်ငွေ နှင့် ငွေပေးချေခြင်း
ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Solatido Entertainment Co., Ltd. က ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့် ငွေပေးချေမှု နည်းများ ကို သုံးပြီး ပေးရန်ရှိသည်ကို Solatido Entertainment Co., Ltd. သို့မဟုတ် Solatido Entertainment Co., Ltd. မှ ခန့်အပ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်ထံသို့ ပေးချေရန် သင့်အနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။
လိုအပ်သောအခွန်အခများကိုလည်း သင့်အနေဖြင့် ပေးရပါမည်။ Solatido Entertainment Co., Ltd. ထံသို့ ပေးရမည့် ပမာဏအပြင်အခွန်အခအတွက် ပေးရန်လိုပါက ထိုအခွန်အခကိုလဲ ထပ်ဆောင်း၍ ပေးဆောင်ရပါမည်။
Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့်အခြားလုပ်ငန်း တစ်ခုခုကို ငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး တာဝန် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်ကို လည်း သိရှိနားလည် သဘောတူပါသည်။
9.အာမခံချက်များ ငြင်းဆိုခြင်း (Disclaimer of Warranties)
Solatido Entertainment Co., Ltd. သည် ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုမှ ရမည့်အခြင်းအရာများအတွက် မည်သို့သောအာမခံချက်မျိုးမှ မလုပ်ပါ။
ဤဝန်ဆောင်မှုတွင်အခြား တစ်စုံတစ်ယောက် (ကြေငြာသူများ၊အခြားဝန်ဆောင်မှု ပေးသူများအပါအဝင်) ပိုင်ဆိုင်သည့် website သို့ link ချိတ်ထားခြင်းများ ရှိနိုင်ပြီးအဆိုပါ link များကို နှိပ်ပြီးအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထို website များ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး သဘောတူ ရန် လိုအပ်သည်ကို သင့်အနေဖြင့် နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါ website များကို သွားရောက်ခြင်းသည် သင့်၏ ရွေးချယ်မှုသာဖြစ်ပြီး Solatido Entertainment Co., Ltd. မှ ထို website များမှ တင်ထားသောအချက်အလက်များအခြင်းအရာများ ပုံများအသံများ ဗီဒီယိုများအတွက် တာဝန်မယူဘူး ဆိုတာကိုလဲ သင့်အနေဖြင့် သိရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို website များကို သုံးပါလို့လဲ Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေနှင့် တိုက်တွန်း ထောက်ခံခြင်း မရှိပါ။
ဤဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွက် ရရှိနိုင်သောအခြင်းအရာများအားလုံးအတွက် Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် ဩဇာအာဏာ သက်ရောက်မှု မရှိကြောင်း ထိုအခြင်းအရာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန် မယူကြောင်းနှင့် ထိုအခြင်းအရာများကိုလဲအားပေး ထောက်ခံခြင်း မရှိကြောင်း သင့်အနေဖြင့် သိရှိသဘောတူပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့်အောက်ပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သတ်သောအာမခံမှုအားလုံးကို ငြင်းပယ်ပါသည်။
(i) ထိုအခြင်းအရာများ ရရှိနိုင်မှု။
(ii) ထိုအခြင်းအရာများ၏ မှန်ကန်မှုအရည်အသွေး နှင့် တန်ဖိုးရှိမှု။
(iii)အခြင်းအရာများနှင့် ဖော်ပြချက်များ ကိုက်ညီမှု။
(iv) ထိုအခြင်းအရာများကို စဉ်ဆက်မပျက် ဆက်လက် ရရှိနိုင်မှု။
ထို့အပြင် ထိုအခြင်းအရာများသည်အောက်ပါအနေအထားများ မရှိပါဟုလဲအာမ မခံနိုင်ပါ။
(i) မဖွယ်မရာများ ပါဝင်မှု၊ သူတပါးအား ထိပါး နစ်နာစေသောအကြောင်းအရာများ၊ သွေးထိုးလှုံဆော်မှုများ ပါဝင်မှု။
(ii) ကြေငြာများ၊အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပတ်သတ်သောအချက်အလက်များ ပါဝင်မှု။
(iii)အခြားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ထားမှု။အခြားသူတစ်စုံတစ်ယောက်၏အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ထားမှု။အခြားသူ တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်မှု။
(iv) ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဖောက်ထွင်း ခိုးယူတတ်သည့် Trojan horses များ ချိန်ကိုက်ထားသော time bombs နှင့် စက်ပစ္စည်းများ စနစ်များ စသည်တို့ကို နှောက်ယှက်ဖျက်စီးမှု ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ထည့်ထာသောအဖျက်အမှောက်ပစ္စည်းများ ပါဝင်မှု။
(v) သင့်ကို တရားရုံးရောက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည့် မည်ကဲ့သို့သောအခြင်းအရာများမဆို ပါဝင်နေမှု
ထို့အပြင် ထိုအခြင်းအရာများကို ရယူသုံးစွဲခြင်းသည် တည်ဆဲ ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း မရှိပါဟုလဲအာမမခံနိုင်ပါ။
ဤဝန်ဆောင်မှု နှင့် ၎င်းမှ ရသောအခြင်းအရာများသည် "as is, as available" basis ဖြစ်သော လက်ငင်း ရှိသည့်အတိုင်း ရနိုင်သည့်အတိုင်းသာ ဖြစ်၍ မိမိမှ သတိထားပြီး ရယူသုံးစွဲရပါမည်။
ဤဝန်ဆောင်မှု နှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတို့ကို လုံခြုံမှု ရှိစေရန်အတွက် Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ လက်ခံထားသော လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ထားသော်လည်းအောက်ပါအခြေအနေများကိုအာမခံခြင်း မရှိပါ။
* ဤဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေရမည်။
* ဤဝန်ဆောင်မှုသည်အချိန်မရွေ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရမည်။
* သင့်၏ ဤဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသုံးစွဲမှုတွင် ပြတ်တောင်းခြင်းမရှိ၊အချိန်မှီ၊ လုံခြုံ၊ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲ ဗိုင်ရပ်စ် သို့မဟုတ်အခြား ပျက်စီးစေနိုင်သော ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာမရှိ။
* ဤဝန်ဆောင်မှုကို သုံး၍ ရယူသုံးစွဲသောအခြင်းအရာများသည် သင်မျှော်လင့်ထားသောအရည်အသွေးကို ပြည့်မှီရမည်။
* ဤဝန်ဆောင်မှုတွင် ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက မုချ ဖြေရှင်းပေးမည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုကို သုံးပြီးအခြင်းအရာများကို ရယူခြင်းသည် သင်ကိုယ်တိုင် ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး ထိုလုပ်ဆောင်မှုအတွက် မိမိသာလျှင် တာဝန်ယူရမည်ကို သိရှိနားလည်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက် ပေးထားသောအချက်အလက်များအခြားသူများ၏အမြင်များအကြံပေးချက်များ စသည်တို့အပေါ်တွင် ချိန်ဆရမည့် တာဝန်သည် သင်၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။
Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့်အာမခံမှုများ သင်၏ ရပိုင်ခွင့်များ စသည်တို့ကို တရားဥပဒေမှ ခွင့်ပြုထား သောအတိုင်းအတာရှိသည့်အလျောက် ငြင်းဆိုပါသည်။
10.ဝတ္တရား ကန့်သတ်ချက် (Exclusion of Liability)
ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံပြုခြင်း၊အသုံးပြု၍မရခြင်း၊ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် သင့်အတွက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ ကုန်ကျစာရိတ်များအားလုံးကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် မသွေဖယ်ပဲ Solatido Entertainment Co., Ltd. မှ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သင့်အနေဖြင့် မကြိုက်နှစ်သက်ပါက တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုရန် ဖြစ်ပါသည်။
11.သင့်၏ Warranty and Indemnity
(၁) ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သဘောတူလိုက်နာရန်အတွက် လုံလောက်သော လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အာဏာ ရှိရပါမည်။
(၂) ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်းသည် သင့်လက်ရှိတွင် လိုက်နာရန် လိုအပ်သောအခြားသော သဘောတူညီမှုများနှင့် သွေဖယ်ခြင်း မရှိစေရပါ။
(၃) ဒီ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် သင့်အား တရားဥပဒေအရအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေမည်။
(၄) ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက် ပေးအပ်သော သင့်၏အချက်အလက်များသည် ပေးအပ်သည့် ကာလတွင်အမှန်တကယ် မှန်ကန်သည့်အချက်အလက်များ ဖြစ်ရမည်။
အောက်ပါအချက်အလက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော Solatido Entertainment Co., Ltd. ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဖက်များ ၎င်းတို့အားလုံး၏အုပ်ချုပ်သူများ ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်စားလှယ်များ တို့အပေါ်တွင် သက်ရောက်လာမည့် တရားစွဲဆိုမှုများ ၎င်း တို့မှ တဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ ကုန်ကျစားရိတ်များအားလုံးကို သင့်အနေဖြင့် တာဝန်ယူပေးပြီး Solatido Entertainment Co., Ltd. ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဖက်များ ၎င်းတို့အားလုံး၏အုပ်ချုပ်သူများ ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်စားလှယ်များ တို့အား မည်သည့် ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိစေရန် တာဝန်ယူပေးရမည်
* သင်၏ ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း။
* ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သင်က ချိုးဖောက်ခြင်း။
* ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သင်က ချိုးဖောက်သည် ဟု သံသယ ရှိသဖြင့် Solatido Entertainment Co., Ltd. မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ကြောင်း သိသာထင်ရှားခြင်း။
*အခြားသူ တစ်စုံတစ်ယောက်၏အခွင့်အရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို သင်က ချိုးဖောက်ခြင်း။
* တည်ဆဲ ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်ကို သင်က ချိုးဖောက်ခြင်း။
သင့်၏အကောင့်အား ဖျက်သိမ်းခြင်း သင့်အား ဤဝန်ဆောင်မှုအား ရယူခြင်းမှ ရပ်စဲခြင်းတို့သည် သင်၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရပ်စဲပေးမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်ပါက Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် တရားသောနည်းဖြင့် ခုခံရန် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ထို ခုခံမှုများအတွက် သင်သည် Solatido Entertainment Co., Ltd. နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး Solatido Entertainment Co., Ltd. ၏ နစ်နာမှုများကို တာဝန်ယူပေးရပါမည်။
Solatido Entertainment Co., Ltd. သည် သင့်အကောင့်အား ခေတ္တဖြစ်စေအမြဲတမ်းဖြစ်စေ ပိတ်သိမ်းခြင်း ဖျက်သိမ်းခြင်း ကို သင့်အားအကြောင်းကြားရန် မလိုဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အကယ်၍အောက်ပါ တစ်ခုခုကို သင်ပြုလုပ်ပါက သင့်ရဲ့အကောင့်ကို Solatido Entertainment Co., Ltd. အနေဖြင့် ချက်ခြင်း ဖျက်သိမ်းမည်ဖြစ်သည်။
* သင့်၏အကောင့်ကိုအသုံးပြုပြီး ခွင့်မပြုထားသော ကိစ္စရပ်များကို လုပ်ကိုင်ခြင်း လုံခြုံရေးကို ထိပါးလာခြင်းများရှိလျှင် သို့မဟုတ် ရှိသည်ဟု Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် ယုံကြည်လောက်အောင်အထောက်အထား စုံလင်လျှင်။
*အခြားသူ တစ်စုံတစ်ယောက်၏အခွင့်အရေးကို ထိပါးခြင်း ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းများကို သင်ကျူးလွန်လျှင် သို့မဟုတ် ကျူးလွန်သည်ဟု Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် ယုံကြည့်လောက်အောင်အထောက်အထား စုံလင်လျှင်။
* Solatido Entertainment Co., Ltd. မှ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးမှုအပေါ် မသမာမှုများကို သင်က ကျူးလွန်လျှင် သို့မဟုတ် ကျူးလွန်သည်ဟု Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် ယုံကြည့်လောက်အောင်အထောက်အထား စုံလင်လျှင်။
* Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် ဥပဒေအရ လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာသောအားဖြင့် ဖြစ်စေ။
* Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် ဤဝန်ဆောင်မှုကို မပေးတော့ရန် ဆုံးဖြတ်၍ ဖျက်သိမ်းလျှင်။
မည်သည့်အကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်စေ သင့်၏အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်းပြီးလျှင်
* ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက် သုံးစွဲသူ တစ်ယောက်အနေဖြင့် သင်ရရှိထားသောအခွင့်အရေးများအားလုံး ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။
* ဤဝန်ဆောင်မှုကို ရယူရန် ရထားသော လိုင်စင်ကို ရုပ်သိမ်ခံရမည်။
* Disclaimer of Warranties, ဝတ္တရား ကန့်သတ်ချက် (Exclusion of Liability), သင့်၏ Warranty and Indemnity, နှင့်ဤစာပိုဒ်ပါအကြောင်းအရာများ မှ လွဲပြီး သင့်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အကြားတွင် မည်သူ့ကိုမှ မည်သူကမျှ ပေးလျော်ရန် မရှိတော့ပါ။
Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် သင့်အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်း လိုက်ခြင်းသည် Solatido Entertainment Co., Ltd. ရရန်ရှိသည့်အခြားသော ရပိုင်ခွင့်များကို ပယ်ဖျက်ခြင်း မမြောက်ပါ။
သင့်အကောင့်ကို ရပ်စဲ သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်း လိုက်ခြင်းသည် Solatido Entertainment Co., Ltd. ၏ ရပိုင်ခွင့်များကို ပယ်ဖျက်ခြင်း မမြောက်သလို သင့်၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကို ပြေလျော့ရာလဲ မရောက်ပါ။
သင့်အကောင့်ကို ရပ်စဲ သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်း လိုက်ခြင်းအတွက် Solatido Entertainment Co., Ltd. သည် သင့်အားအခကြေးငွေ ပြန်လည်ပေးရန် တာဝန် မရှိပါ။
သင့်အကောင့်ကို ရပ်စဲ သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်း လိုက်ခြင်းသည် ဘယ်သူ့ကိုမှ သူတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖြေလျော့ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ယခင်ရှိသော ပေးရန်ကျန်များ ရော နောက်ဖြစ်လာမည့် ပေးရန်ကျန်များကိုပါ ဆက်လက် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
Solatido Entertainment Co., Ltd. ၏ တရားဝင် စာဖြင့် ခွင့်ပြုခြင်း မရှိဘဲ သင့်၏ ရပိုင်ခွင့်များ နှင့် တာဝန် ဝတ္တရားများကိုအခြားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်သို့ လွှဲအပ်ခွင့် မရှိပါ။
Solatido Entertainment Co., Ltd.အနေဖြင့် ၎င်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကိုအခြားသူ တစ်စုံတစ်ယောက်ထံသို့အချိန်မရွေး သင့်အားအသိမပေးပဲ လွှဲအပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Solatido Entertainment Co., Ltd. မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်းအရေးယူရန် နှောင့်နှေးခြင်း ပျက်ကွက်ခြင်းများ ရှိခြင်းသည် ထိုပျက်ကွက်မှုများကို ခွင့်လွှတ်ဖြင်း ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူ၍ မရပါ။ Solatido Entertainment Co., Ltd. ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုလဲ ပျက်ပျယ်သွားခြင်း မရှိရပါ။ Solatido Entertainment Co., Ltd. အနေဖြင့်အချိန်မရွေးအရေးယူ ဆောင်ရွက် နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ဥပဒေ တစ်ခုခုကြောင့် ဤစည်းမျဉ်စည်းကမ်း စာပါအချက် တစ်ခုခု သည် ပျက်ပျယ်ရပါက ထိုအချက် တစ်ခုသာလျှင် ပျက်ပျယ်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မည်သို့ မှ ပတ်သတ်မည်မဟုတ်ဘဲ ဆက်လက် တည်တံ့မည်ဖြစ်ပါသည်။
Solatido Entertainment Co., Ltd. သည် ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်တွင်အရေးယူရန် လိုမလို မည်မျှအထိအရေးယူမည် စသည်ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့် ဤဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲမှုအားလုံးစသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီအဓိပ္ပါယ် ဖော်ဆောင်ရမည်။ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားရုံးများတွင် ဖြေရှင်းရမည်ကို သင့်အနေဖြင့် နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တွင် ရေးထားသောအခေါ်အဝေါ်များ သည်အောက်တွင် ဖော်ပြထားသလိုအဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်မှု ှရှိသည်။
အကောင့် ဆိုသည်မျာ ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက် သုံးစွဲသူမှ မှတ်ပုံတင်ထားသောအကောင့်ဖြစ်သည်။
ကြေငြာသူ ဆိုသည်မှာ ဤဝန်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်သော ကြေငြာများ၏အသိဉာဏ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်များ ကို ပိုင်ဆိုင်သူများကို ဆိုလိုသည်။
အခြားအရာများ ဆိုသည်မှာ ဤဝန်ဆောင်မှုမှ တဆင့် ရယူသုံးစွဲနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားသောအရုပ်၊အသံ၊ ဗီဒီယိုအစရှိသော ဘယ်လို ပုံစံမျိုးဖြင့်ရှိသည် ဘယ်လောက်အချိန်ကြာမြင့်သည်နှင့် မပတ်သတ်သော ဆွဲထားသော ပုံများ၊ ဓါတ်ပုံ၊ သီချင်း၊ ဖုန်းအသံများ၊ သီချင်းဗီဒီယိုများ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
အခကြေးငွေ ဆိုသည်မှာ ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့် ၎င်း၏အခြင်းအရာများကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ပေးရသောအခေကြေးငွေကို ဆိုလိုသည်။ ထိုပေးရန်ရှိသောအခကြေးငွေများကို Solatido Entertainment Co., Ltd. မှ သင့်အားအလျဉ်းသင့်သလိုအကြောင်းကြားပါမည်။
အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့် ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာတဝှမ်း ဘယ်နေရာတွင် ရှိနေပါစေ ယခုပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ နောင်တွင်ပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်စေအစရှိသော ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များကိုအောက်ပါအရာများ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ကို ရည်ညွှန်းသည်။ patents, industrial designs, copyright, trademarks, service marks, trade dress, trade names, corporate names, proprietary logos or indicia, and other source or business identifiers, artist, performer or producer rights, database rights, design rights, logos, business methods, trade secrets, rights in know-how or business methods (whether registered or unregistered, and whether patented, patentable or not), rights of confidence or industrial or ancillary property rights, or any application to register any of the foregoing rights
ဤဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ Sellel Music မှ ဖန်တီးထားသော portal သို့မဟုတ် applicationအစရှိသော software တစ်ခုခု မှ တဆင့် ရယူအသုံးပြုနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှု၊ ၎င်းနောက် Solatido Entertainment Co., Ltd. မှအချိန်မရွေး စိတ်တိုင်းကျ ပြုလုပ်သော ပြင်ဆင်မှုများ ထပ်တိုးမှုများအားလုံး ကို ဆိုလိုသည်။
Solatido Entertainment Co., Ltd. ၏ လုပ်ငန်းဖော်ကုမ္ပဏီများ ဆိုသည်မှာ Solatido Entertainment Co., Ltd. နှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆိုလိုသည်။
အခွန် ဆိုသည်မှာ Solatido Entertainment Co., Ltd. ထံသို့ ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပေးရန်ရှိသောအခကြေးငွေနှင့် ပတ်သတ်၍ ပေးရန်လိုသော ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ပေးရသောအခွန်များ duties, levies, နှင့်အခြားအလားတူ ကောက်ခံမှုများ ဒဏ်ကြေးများ စသဖြင့်အမည် မည်သို့ပင် ရှိစေကာမူ ဥပဒေပြဌာန်းပြီး ကောက်ခံမှုများအားလုံးပါဝင်သည်။
အခြားသက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ ဆိုသည်မှာ ဤဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါသော ပါလာမည့်အခြင်းအရာများ၏ မူပိုင်ခွင့်များကို ယခုပိုင်နေသော နောင်တွင်ပိုင်လာမည့် လုပ်ငန်းများ လူပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး ပါဝင်သည်။
စာတစ်ပိုဒ်ခြင်း ၏ ခေါင်းစဉ်များသည် ဖတ်ရှုရ လွယ်ကူစေရန် ရေးထားခြင်းသာဖြစ်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုခြင်း မပြုရပါ။
အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ဧကဝုစ်ကိန်းနှင့် ဗဟုဝုစ်ကိန်းများကိုအဆင်ပြေသလိုအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပုလ္လိင် နှင့် ဣတ္တိလ္လင် တို့ကိုလဲအလျဉ်းသင့်သလို လဲလှယ်သုံးစွဲပြီး တစ်ခု ကို ရည်ညွှန်းလျှင်အခြားတစ်ခုပါ ပါသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ဟု ရည်ညွှန်းရာတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ လုပ်ငန်း၊ ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်း။အသင်းအဖွဲ့၊ statutory body, partnership, limited liability company, joint venture, trust, estate, unincorporated organisation or government, state or any political subdivision, instrumentality, agency or authority စသည်တို့အားလုံး ဖြစ်နိုင်သည်။
The Service is provided and operated by Solatido Entertainment Co., Ltd.
Before you can access or use the Service, you must agree to be bound by the following terms and conditions of use (the “Terms”). The Terms constitutealegal agreement between yourself and Solatido Entertainment Co., Ltd. You shall be deemed to have agreed to these Terms if you commence access to or use of the Service. If you do not or cannot agree to these Terms, you are not permitted to and shall not access or use the Service and you must immediately cease any access to or use of the Service.
Solatido Entertainment Co., Ltd. may modify these Terms at any time at its sole discretion, and such modifications shall become part of the Terms and be effective immediately upon posting of the modified terms to the Service. You agree to review the Terms periodically to be aware of such modifications and your continued access to or use of the Service after such modifications shall be deemed to be your conclusive acceptance of such modified terms.
Solatido Entertainment Co., Ltd. may make modifications and additions to the Service or any part(s) thereof, including incorporating new products, features and functionality, at any time at its sole discretion without liability to you or any third party. Your continued access to or use of the Service after such modifications and/or additions have been made shall be deemed to be your conclusive acceptance of such modifications and/or additions.
The Service is not provided to you as part of any other product, service or offering (whether provided by Solatido Entertainment Co., Ltd. or any Solatido Entertainment Co., Ltd. Affiliate). No purchase or provision of any other product, service or offering shall be construed to represent or guarantee you access to or the use of the Service and the provision of any other product, service or offering by any Solatido Entertainment Co., Ltd. Affiliate does not amount toaprovision of the Service by such Solatido Entertainment Co., Ltd. Affiliate.
The listing of any prohibited activities in these Terms is not exhaustive. Solatido Entertainment Co., Ltd. reserves the right to determine that any conduct that is or could be harmful to the Service, our servers, or use of the Service by any user, is in violation of these Terms and to exercise any or all of the remedies contained in these Terms.
2.Requirements for access to Service
*your access to and use of the Service is subject to your compliance with such requirements, including as to equipment and software, as specified within the Service or as Solatido Entertainment Co., Ltd. may otherwise specify from time to time;
*compliance with such requirements may require you to obtain equipment, software and services which may be available only from third parties and which may be subject to other terms and/or the payment of fees;
*you shall use and maintain all such equipment and software in such manner as the relevant manufacturer may instruct, including installing such updates as may be required; and
*your ability to access and use the Service, and the quality of your experience with the Service, are dependent on the performance of equipment, software and services provided by third parties which is outside the control of Solatido Entertainment Co., Ltd. and in respect of which Solatido Entertainment Co., Ltd. makes no representation or warranty and shall have no obligation in respect thereof.
3.Installation of and registration for Service
You shall be liable for engaging or procuring at your own cost any equipment, software or services (including any mobile telecommunications service, broadband, fibre service or any other Internet connection provided by any Internet service provider, including Solatido Entertainment Co., Ltd.), any third party installation or other professional services which may be necessary for the proper installation and use of the Service.
You shall be responsible for ensuring that all equipment and systems related to the use of the Service meet the minimum requirements as may be stipulated by Solatido Entertainment Co., Ltd. from time to time for the Service to function effectively and that they are compatible and can properly function and inter-operate with the Service. Solatido Entertainment Co., Ltd. is not liable or responsible for any failure in the Service or damage to equipment due to your use of equipment that fails to meet such minimum requirements.
You shall be liable for all damages in relation to the performance of Solatido Entertainment Co., Ltd. network (including those arising out of the failure or degradation of any equipment) as may howsoever result from your non-compliance with the above obligation in preceding Clause. Solatido Entertainment Co., Ltd. makes no warranty whatsoever regarding the ability or continued ability of the Service to function and/or inter-operate with your equipment or system which does not meet the minimum requirements stipulated by Solatido Entertainment Co., Ltd. and specifically disclaims any and all warranties or representations relating thereto whether express or implied.
For the avoidance of doubt, the following services do not form part of the Service and Solatido Entertainment Co., Ltd. is under no obligation to provide any of the same:
*procurement and installation of any hardware equipment, software or service (including any mobile telecommunications service, broadband, fibre service or any other Internet connection provided by any Internet service provider, including Solatido Entertainment Co., Ltd.) that may be necessary to receive or use the Service; and
*any service not available on the Service that is not otherwise expressly provided herein as being part of the Service.
Your access to the Service or to certain features of the Service may require you to register for Account and login information. You do not have the right to share your Account with any third party. You are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account and password, and you agree to accept responsibility for all activity on your Account, including unauthorised use of the Service by any third party that accesses the App through your Account, and for the security of your Account. You also agree to the following:
*if so requested, you will provide accurate and up-to-date email address, contact and billing information to Solatido Entertainment Co., Ltd.;
*you shall notify Solatido Entertainment Co., Ltd. of any unauthorised use of your Account, including by third parties that have accessed the Service through your Account; and
*you shall not transfer or share your Account or login information with any other party.
You shall immediately notify Solatido Entertainment Co., Ltd. in the event of any unauthorised disclosure or use of your Account or login information. Until Solatido Entertainment Co., Ltd. is notified and for7working days thereafter (or such other period as Solatido Entertainment Co., Ltd. may notify you), you shall be responsible for any and all consequences arising out of the unauthorised use of the Service.
*different rights and benefits may be granted to different users of the Service, as Solatido Entertainment Co., Ltd. may determine, at its sole discretion;
*such rights and benefits may be subject to your compliance with certain conditions or obligations as indicated on the Service or otherwise; and
*Solatido Entertainment Co., Ltd. does not represent or warrant the continued availability of any right or benefit and may, at any time at its sole discretion, revise, vary or withdraw any right or benefit, even if such right or benefit had previously been granted to you.
You represent and warrant that your access to and use of the Service will not compromise the security or integrity of Solatido Entertainment Co., Ltd. systems, networks, site(s) or servers, whether by allowing intruders into the same, introducing viruses or other threats, imposingadisproportionate or unreasonably large load on the Service or its infrastructure, or using any computer programming routine, file, or device to damage or interfere with the operation of the Service.
Your usage of the Service may be controlled and monitored by Solatido Entertainment Co., Ltd. (where applicable) to ensure your compliance with these Terms or to satisfy any law, regulation or any request of any applicable authority.
You are authorised to access and use the Service only for your personal and non-commercial use. You shall not, and shall not allow any other person to use the Service in any way other than as set out in these Terms without Solatido Entertainment Co., Ltd. prior written consent, and you shall not split, redirect, redistribute, rebroadcast, or otherwise deal with, offer or supply the Service in any manner whatsoever.
*cause unfair reimbursements for copyright owners by inflating play counts for specific songs in any means. Such play counts may be removed when they are deemed by us to be intentional disruption.
*cause, nor knowingly allow others to cause, any nuisance, annoyance or inconvenience to any person (including Solatido Entertainment Co., Ltd., the Solatido Entertainment Co., Ltd. Affiliates or other users of the Service) by any means;
*use any robot, spider, or other automatic or manual device or process to monitor or copy Solatido Entertainment Co., Ltd. web pages or any portion of the content contained on such web pages or websites without the express written permission of Solatido Entertainment Co., Ltd. or the relevant Third Party Providers;
*use any device, software or routine to interfere or attempt to interfere with the proper working of the Service, or to impose an unreasonably or disproportionately large load on the servers serving the Service;
*use or exploit the Service or such other information or content in connection with any obscene, defamatory or illegal material, or any tobacco, pornography, pharmaceuticals or firearms, for any unlawful purpose or in any manner not expressly authorised by the relevant and appropriate parties concerned, which may include the relevant copyright owner of the information or content; or
*attempt to violate, tamper with or circumvent any security measures, encryption codes or technological protection measures in or used in connection with the Service or Content or otherwise engage in any illegal activity in relation to the Service, or enable or assist any person to do so.
Solatido Entertainment Co., Ltd. hereby grants youanon-exclusive, revocable, personal licence to use the Service solely in the manner set out herein and in accordance with Solatido Entertainment Co., Ltd. instructions. The licence granted to you does not include any right to copy, reverse-engineer, decompile, modify or tamper with any part of the Service. Without prejudice to Termination Clause, Solatido Entertainment Co., Ltd. may, at its sole discretion, modify the terms on which such licence is granted or, in the event that you breach any of these Terms, revoke such licence.
You may only access and use the Service in the areas of contractual operation and licensing in the manner advised by Solatido Entertainment Co., Ltd., and you shall not, or attempt or assist another person to, tamper, modify, reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise use any part of the Service in any manner not expressly permitted by Solatido Entertainment Co., Ltd. or create derivative works based on the Service. Should you choose to install, access or otherwise use the Service from any other location other than the areas of contractual operation and licensing, if you do so on your own initiative and are responsible for compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable. For the purposes of these Terms, "reverse engineering" shall include the examination or analysis of the Service to determine the source code, structure, organisation, internal design, algorithms or encryption devices of the underlying technology of the Service.
By purchasing Content on or through the Service, you represent and warrant that you are located in the areas of contractual operation and licensing at the time of such purchase. Should Solatido Entertainment Co., Ltd. at any time become aware that you have breached this warranty, Solatido Entertainment Co., Ltd. shall be entitled at its sole discretion to refuse to provide the Service or any Content or limit, vary, suspend or terminate access to or use of the Service or any Content or any part(s) thereof to you.
*all descriptions and information relating to the Content are provided for convenience only, and that does not guarantee their accuracy or completeness;
*notwithstanding any indications to the contrary on the Service or otherwise, the Content is licensed and not sold to you;
*the licence in respect of any Content that you obtain access to through the Service is subject to the rights of the relevant Third Party Provider and is limited in scope toanon-exclusive, non-transferable, licence for you (and notathird party) to access such Content via the Service, in the areas of contractual and licensing for your personal and non-commercial use, and such licence confers no title or ownership;
*any unauthorized reproduction or distribution of the Content is expressly prohibited and may violate applicable law;
*you shall comply with the restrictions in respect of the Intellectual Property Rights in, to or over the Content as set out in Clause Intellectual Property Rights;
*your access to or use of the Content may be subject to additional restrictions which Solatido Entertainment Co., Ltd. may impose from time to time; and
*you shall not transfer the Content from any wireless electronic device, including devices such as personal or portable computers, mobile telephone handsets, personal digital assistants and the like.
You acknowledge and agree that certain Third Party Providers shall have the right to enforce Solatido Entertainment Co., Ltd. rights in respect of your access to and use of the Content.
6.Intellectually Property Rights
All trademarks, trade names, logos and service marks appearing on the Service (including the Solatido Entertainment Co., Ltd. name or any trademarks of Solatido Entertainment Co., Ltd. belong to Solatido Entertainment Co., Ltd., Solatido Entertainment Co., Ltd. Affiliates, Advertisers or Third Party Providers. In particular, the grant to you ofaright to access and use the Service shall not be construed as granting, by implication, estoppel or otherwise, any licence or right to use the trademarks, trade names, logos or service marks appearing on the Service without the prior written consent of Solatido Entertainment Co., Ltd. or such Solatido Entertainment Co., Ltd. Affiliates, Advertisers or Third Party Providers. You may not, without Solatido Entertainment Co., Ltd. prior written consent, use any such trademarks, trade names, logos or service marks asahyperlink to the Service or any other website. All rights not expressly granted herein are reserved.
The Service and all content contained in or made available by the Service (including any Content), and all Intellectual Property Rights in, to or over the Service and such content, are provided by and belong to Solatido Entertainment Co., Ltd., Solatido Entertainment Co., Ltd. Affiliates, Advertisers or Third Party Providers. You shall not reproduce, modify, edit, repurpose, transfer, distribute, republish, download, post, transmit, sell, rent, lease, display, perform, broadcast, sub-licence, assign or otherwise make available any rights in or to the Service or any content contained in or made available through the Service (including any Content), in any form or by any means including electronic or mechanical photocopying or recording without the prior written permission of Solatido Entertainment Co., Ltd. or the relevant Intellectual Property Rights owner. All rights not expressly granted herein are reserved.
Solatido Entertainment Co., Ltd. shall use reasonable endeavours to provide you with technical assistance and support as set out in and in accordance with the technical support details available on the Service (if any).
8.Billing, Payment and Fees
You shall pay to Solatido Entertainment Co., Ltd. or its authorised billing agent the Fees and any other sums due or payable to Solatido Entertainment Co., Ltd. in accordance with the relevant terms of the applicable payment methods as prescribed by Solatido Entertainment Co., Ltd.
You shall bear and pay all Taxes. If you are required under any applicable law to deduct or withhold any sum as Taxes imposed on or in respect of any amount due or payable to Solatido Entertainment Co., Ltd., you shall make such deduction or withholding as required and the amount payable to Solatido Entertainment Co., Ltd. shall be increased by any such amount necessary to ensure that Solatido Entertainment Co., Ltd. receivesanet amount equal to the amount which Solatido Entertainment Co., Ltd. would have received in the absence of any such deduction or withholding.
You acknowledge and agree that Solatido Entertainment Co., Ltd. may assign to other entities its right to bill and collect the Fees under these Terms.
Solatido Entertainment Co., Ltd. does not make any express or implied warranties, representations or endorsements whatsoever (including warranties of title or non-infringement, or warranties as to merchantability or fitness foraparticular purpose) with regard to the Service or any material or content on the Service (including any Content).
You acknowledge and agree that Solatido Entertainment Co., Ltd. has no control over, excludes all liability for and cannot be deemed to have endorsed the content of any material which can be accessed by accessing or using the Service, including any Content. In particular, Solatido Entertainment Co., Ltd. disclaims all warranties:
(i) The availability of any such content;
(ii) The accuracy, quality or merchantability of any such content;
(iii) Compliance with any description or requirement of any such content; or
(iv) The uninterrupted viewing of or access to any such content;
that any such content will not;
(i) Contain any obscene, offensive, defamatory or otherwise actionable material;
(ii) Contain any advertising and promotional messages;
(iii) Violate or infringe any Intellectual Property Rights or proprietary, privacy or publicity rights of any person, or violate any obligation of confidence or any other proprietary right;
(iv) Contain any viruses, Trojan horses, time bombs or other disabling devices intended to detrimentally interfere, damage, surreptitiously intercept or expropriate any equipment, system or network; or
(v) Contain any material in any form that would otherwise render you liable for or expose you to any proceedings whatsoever; or
The Service and the Content are provided on an “as is, as available” basis.
Solatido Entertainment Co., Ltd. takes certain industry-accepted precautions to secure the Service or portions thereof. However, Solatido Entertainment Co., Ltd. does not warrant that:
*the use of the Service will meet your requirements;
*the Service will always be available;
*your use of the Service will be uninterrupted, timely, secure, error-free or virus-free, or free from other invasive or damaging code;
*the quality of any Content accessed by you through your use of the Service will meet your expectations; or
*any errors in the Service will be rectified.
To the extent permitted by applicable law, Solatido Entertainment Co., Ltd. hereby excludes all warranties, rights and remedies (including warranties implied by statute or otherwise) to which you would otherwise be entitled by law.
To the extent permitted by applicable law, in no event shall Solatido Entertainment Co., Ltd., or any of the Solatido Entertainment Co., Ltd. Affiliates, be liable to you in any way whatsoever for any direct, indirect, incidental, special and/or consequential damages, loss of profits, costs or expenses whatsoever, whether in contract or tort (including negligence or breach of statutory duty) or otherwise arising out of or in connection with these Terms or your access to or use of the Service or any Content, or any inability to access or use the Service or any Content.
11.Your Warranty and Indemnity
To the extent permitted by applicable law, you agree to defend, indemnify and hold harmless Solatido Entertainment Co., Ltd., the Solatido Entertainment Co., Ltd. Affiliates and their respective officers, directors, employees and agents from and against any and all actions, claims, proceedings, costs (including legal costs incurred by Solatido Entertainment Co., Ltd. or any of the Solatido Entertainment Co., Ltd. Affiliates in defending any such actions, claims or proceedings), liability, losses and damages whatsoever which may be brought or commenced against Solatido Entertainment Co., Ltd. or any of the Solatido Entertainment Co., Ltd. Affiliates by any person and/or which Solatido Entertainment Co., Ltd. or any of the Solatido Entertainment Co., Ltd. Affiliates may sustain, incur or suffer, as the case may be, arising out of or in connection with or by reason of:
*your access to or use of the Service or any Content;
*your breach of any of these Terms;
*any action taken by Solatido Entertainment Co., Ltd. as part of its investigation ofasuspected violation of these Terms or asaresult of its finding and decision thataviolation of these Terms has occurred;
*your infringement or violation of any rights ofathird party; or
*your infringement or violation of any applicable law.
Your obligations under this Clause shall survive any termination of your access to and use of the Service or your relationship with Solatido Entertainment Co., Ltd. Solatido Entertainment Co., Ltd. reserves the right to assume the defence and control of any matter subject to indemnification by you, in which event you shall cooperate with Solatido Entertainment Co., Ltd. in asserting any available defences.
Solatido Entertainment Co., Ltd. may suspend (indefinitely or for such period as it may consider appropriate) or terminate your Account at any time at its sole discretion without notice to you.
Solatido Entertainment Co., Ltd. may also terminate your Account immediately without notice to you if:
*Solatido Entertainment Co., Ltd. has reason to believe that your Account has been the subject of any unauthorised access, use or interception or other security breach;
*you have, or Solatido Entertainment Co., Ltd. has reason to believe that you have, committedabreach of any of these Terms, or infringed or violated the rights of any third party or any applicable law;
*you have, or Solatido Entertainment Co., Ltd. has reason to believe that you have, engaged in any activity that may hinder or adversely affect Solatido Entertainment Co., Ltd. provision of the Service or the performance of the Service;
*Solatido Entertainment Co., Ltd. is acting in compliance witharequirement of any relevant regulatory authority or law enforcement body; or
*Solatido Entertainment Co., Ltd. withdraws, discontinues or cancels the provision of the Service.
*you shall cease to have any rights and benefits asauser of the Service;
*your licence to access the Service shall cease; and
*save for the provisions of Clauses Disclaimer of Warranties, Exclusion of Liability, Your Warranty and Indemnity, and this Clause, no party shall have any further obligations to the other party under these Terms.
Solatido Entertainment Co., Ltd. right to terminate your Account under this Clause shall be without prejudice to any other rights or remedies, which Solatido Entertainment Co., Ltd. may have under these Terms.
The suspension or termination of your Account shall not affect the rights of Solatido Entertainment Co., Ltd. or your obligations under any other agreement with or any indemnity given by you to Solatido Entertainment Co., Ltd. thereunder.
You shall not be entitled to any payment, compensation or damages of any sort from Solatido Entertainment Co., Ltd. in relation to the termination of your Account.
The termination of your Account shall not release any party from any liability, which at the time of termination has already accrued, or which thereafter may accrue.
You shall not assign, transfer or encumber any or all of your rights, interests and obligations under these Terms without the prior written consent of Solatido Entertainment Co., Ltd.
Solatido Entertainment Co., Ltd. may assign and transfer any or all of its rights, interests and obligations under these Terms to any third party without your prior written consent.
No failure to exercise or enforce, and no delay on the part of Solatido Entertainment Co., Ltd. in exercising or enforcing its rights under these Terms shall operate asawaiver thereof nor shall such failure or delay in any way prejudice or affect the right of Solatido Entertainment Co., Ltd. at any time thereafter to act strictly in accordance with its rights and powers under these Terms.
Solatido Entertainment Co., Ltd. reserves the right to take such steps as Solatido Entertainment Co., Ltd. believes are reasonably necessary or appropriate to enforce and/or verify compliance with these Terms.
These Terms and your access to and use of the Service shall be subject to and governed by the laws of the Union of Myanmar without regard to conflict of law provisions. You agree that any dispute arising out of these Terms shall be resolved exclusively in the courts of Myanmar.
*”Account” shall meanauser account for the Service.
*”Advertiser” means any third party that owns Intellectual Property Rights in advertisements in or on the Service.
*”Content” means any and all visual, audio or video content made available on or through the Service, including artwork, songs, ringtones and music videos, regardless of duration or format.
*”Fees” means the fees payable for the registration for, subscription to, access to and use of the Service or Content, and such other fees, in each case as Solatido Entertainment Co., Ltd. may inform you from time to time, whether via the Service or otherwise.
*”Intellectual Property Rights” means all intellectual property rights, including patents, industrial designs, copyright, trademarks, service marks, trade dress, trade names, corporate names, proprietary logos or indicia, and other source or business identifiers, artist, performer or producer rights, database rights, design rights, logos, business methods, trade secrets, rights in know-how or business methods (whether registered or unregistered, and whether patented, patentable or not), rights of confidence or industrial or ancillary property rights, or any application to register any of the foregoing rights, in any part of the world and whether current or prospective, and any other similar right(s) whether or not vested, future or contingent, in any and all media now known or hereafter invented.
*”Service” means all services available via the Sellel Music portal and/or application, and, in the case of the application, includes the machine readable binary code of the software application required to access and use the Service, and any modifications or updates thereto that Solatido Entertainment Co., Ltd. may make available to Users from time to time at its sole discretion.
*”Solatido Entertainment Co., Ltd. Affiliate” means corporations related to Solatido Entertainment Co., Ltd.
*”Taxes” means all taxes (including goods and services taxes), duties, levies, and other similar charges (and any related interest and penalties) however designated, imposed under any applicable law with respect to the sale or provision of any Content to you or on any fees or payments due or payable to Solatido Entertainment Co., Ltd. by you.
*”Third Party Provider” meansathird party which provides or makes available or will provide or make available any Content or who has developed or created or who is developing or creating any Content or who otherwise owns or will own any of the Intellectual Property Rights in any of the Content.
References to any “person” include any natural person, corporation, judicial entity, association, statutory body, partnership, limited liability company, joint venture, trust, estate, unincorporated organisation or government, state or any political subdivision, instrumentality, agency or authority."